Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: » Isiqondisi seArhente yeZindlu » Abarhwebi bezindlu kunye nabarhwebi » CA » Québec » Montréal » Iarhente yezezindlu kunye nezezindlu 1
:: :: :: www.landmark-canada.com
Inombolo yelizwe:: H9R 5M9
Ukuthenga ikhaya yenye yezona zinto zifezekisayo zomntu okhangela ngokuqinisekileyo kunye nozinzo kwinto enokuba lilizwe eliphithizelayo. Olu tyalo mali lubalulekileyo kwinqaku leminyaka yokuzibhokoxa, kwaye ikhokelela umntu kwisahluko esitsha ebomini babo.
Iingcali zeearhente zezezindlu kunye nobambiso kwiLandmark Group ziyakuqonda oku, kwaye sikwenza uxanduva lwethu ukuba banciphise inkqubo yokuthenga abathengi bethu ekhaya. Ayifumaneki nje ngaphandle kwexesha eliqhelekileyo lokubhankisha, kodwa songeza ukuthinta okukhethekileyo kwiinkonzo ezinikezelwayo.
Sinikela ngeenkonzo ezilandelayo:
• Umda wecala lokulingana kwekhaya
• Utyalomali ekuhlaleni
• Ukuphononongwa ngokutsha kwendlu yokuhlala
• Iimali mboleko zentengiso
• Ubambiso lwesibini
• Imali mboleko yokuziqeshisa
• Imali mboleko yomnini wamashishini amancinci
Ukudityaniswa kobambiso (amatyala)
Nxibelelana nentengiso (514) 316-xxxx